RIIXA MIYAAN OO LOO SAMEE MAY S Turbo FSX - Rikoooo
downloads 10 983
Kani waa midka caadiga ah ee Mooney Bravo FSX wax looga beddelay qeexitaanka Mooney Acclaim Type S Turbo. Nooca 'Acclaim Type S' waa midka ugu dhaqsaha badan bistooladda. Xawaareheeda xawaareyntu waa mid cajiib ah 280 mayl saacadiiba 25,000 cagood ayaan diyaaraddaan u dhigi karnaa isla daraasaddii waxqabadka turboprops. Dhaqdhaqaaqyada duulimaadka cusub, diyaaraddaan waxay leedahay labo nooc, nooca nooca isbeega ee caadiga ah iyo midka leh G1000. add-on waxay leedahay gole 2D iyo 3D oo lagu daray dhawaaqyada caadooyinka. Waxaa ku jira sawirrada iyo taariikhda Nooca "S Acclaim".